China Truck side mirror PK9470 Umkhiqizi kanye Umthengisi | I-West Bridge
Iloli lethu lesibuko i-PK9470 linekhwalithi esezingeni lokuqala nokubukeka okuhle.Lilungele uchungechunge lwe-VOLVO FH.Izibuko eziningi zithole isitifiketi se-E-mark nesitifiketi se-DOT. Inkampani yethu inenqwaba yokusungula nokuhlangenwe nakho kwemboni yezimoto zesibuko semoto yabagibeli. Inkampani yethu ingumkhiqizi oqeqeshiwe wezibuko zamaloli, nemishini yokuhlola ephelele namandla amakhulu wezobuchwepheshe.
Iloli lethu lesibuko i-PK9470 linekhwalithi esezingeni lokuqala nokubukeka okuhle.Lilungele uchungechunge lwe-VOLVO FH.Izibuko eziningi zithole isitifiketi se-E-mark nesitifiketi se-DOT. Inkampani yethu inenqwaba yokusungula nokuhlangenwe nakho kwemboni yezimoto zesibuko semoto yabagibeli. Inkampani yethu ingumkhiqizi oqeqeshiwe wezibuko zamaloli, nemishini yokuhlola ephelele namandla amakhulu wezobuchwepheshe. Ngezinhlobonhlobo eziningi, ikhwalithi enhle, inani elifanele kanye nesitayela semfashini, imikhiqizo yethu isetshenziswa esibukweni sokuguqula iloli. Imikhiqizo yethu yaziwa kabanzi futhi ithembekile ngabasebenzisi, futhi ingahlangabezana nezidingo ezishintshayo zezomnotho nezenhlalo. Njengomphumela wemikhiqizo yethu esezingeni eliphakeme kanye nokuhlinzekwa kwamakhasimende okuvelele, sizuze inethiwekhi yokuthengisa yomhlaba wonke efinyelela: i-Southeast Asia, Mid Asia, Europe, South America nase Africa.Siyakwamukela amakhasimende amasha namadala avela kuzo zonke izizinda zokuphila ukubiza nokubhala ukuxoxa ngebhizinisi nokwenza ubuhlakani ndawonye.
ISICELO IVOLVO FH uchungechunge
Olandelayo: Side Mirror Iloli PK9583